Gudiga doorashooyinka qaranka oo faahfaahiyay xilliga doorasho dhici karto - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Gudiga doorashooyinka qaranka oo faahfaahiyay xilliga doorasho dhici karto
Gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliimo Yarey ayaa shaaca ka qaaday in doorashada dalku dib u dhacayso mar ay hadal kahor jeedisay golaha shacabka. Sababta ugu weyn ayaa ah in maamul jufeedyada oo dabada ay ka riixayaan kooxda beesha caalamku ay sabab u yihiin dib u dhaca doorasho qof iyo coda.
”Waxay ku fashilmeen inay bixiyaan kharashka ku baxaya doorashada halka amnigu aanu ahayn sidii la rabay, cudurka Kooro oo welli jira, ayay tiri Xaliimo yarey.
Haddii markaasi la qaban karin nooca qof iyo codka ee lagu qasbayo dalka, nooca doorasho ee labaad oo ka kharash yar wuxuu qabsoomi karaa muddo 9 bilood gudahooda, waxayna u baahan tahay in laysla garto.
Sidaasi awgeed waxa loo baahan yahay ugu yaraan 13 bilood in lagu daro si doorasho la isku halayn karo dalka ugu dhacdo oo qof iyo coda ayay tiri Xaliimo Yarey oo ku beegan bisha sideedaad ee 2021.
Halka tan diiwaangelinta isla maalinta ah ee lagu soo doortey madaxweyne Farmaajo ay dhici karto keliya bisha sadexaad ee 2021. Ilaa hadda ma jirto xisbiyo si rasmiya loo diiwaan geliyay lama gelin hawsha kale ee ku xeeran diyaarinta doorashada sida kharashkii loo baahnaa.
Doorashada qof iyo cod ayaa gaaladu rabtey in laga dhigo sida Maraykanka oo la qabto bisha Noofambar.